သူတို့အာဘော် | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 53
တူမောင်ညို ။ ဇွန် ၁ ၊၂၀၁၂ ဆန္ဒပြမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအချက် ၂ ချက်ကိုသာမူတည်ပြီး ကျနော့်သဘောထားအမြင်များကိုတင်ပြပါမည်။ ၁။ ဆန္ဒပြမှုများအပေါ် အာဏာပိုင်အဆင့်ဆင့်၏ တုန့်ပြန်ကိုင်တွယ်ပုံအမျိုးမျိုး ၂။ ဆန္ဒပြမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ “စိုးရိမ်မှု”...
http://ppMoemaka.blogspot.com/ ကိုအေးအောင်ရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုပြသနေတဲ့ ဖခင် ဦးသောင်းစိန် (ဓာတ်ပုံ – AFP) ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း အွန်လိုင်းမှာ တွေ့ရတာက ထောင်ကျနေသူကိုအေးအောင် ရဲ့ မိဘနှစ်ပါး ဓာတ်ပုံတွေပါ။ သူတို့က သတင်းထောက်ကို ကိုအေးအောင်ရဲ့ ဓာတ်ပုံ...
ညွန့်ထွေးမေ ၁၅၊ ၂၀၁၂ ကော်ပီကူးခြင်း ရန်ကုန်မှာ ကျနော်တို့လုပ်နေတဲ့ ဂျာနယ်တွေမှာ ကော်ပီကူးကြတယ်။ ကော်ပီကူးတာ ကောင်းတယ်။ အချိန်ရှားပါး၊ ရေးနိုင် ဘာသာပြန်နိုင်တဲ့သူ ရှားပါး၊ ငွေကြေးနဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယ ချို့တဲ့ကြတဲ့...
ဖက်ထိပ်များ နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ငြိမ်းချမ်းအေးမေ၁၄၊ ၂၀၁၂(photo: Reuters)”—နိုင်ငံတာကာ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ တန်းစီ နောက်ကျတာ၊ ဝတ်စုံကို သေသေသပ်သပ် မဝတ်တာလို အသေးစားပြစ်မှုတွေ ကျူးလွန်ရင် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးရခြင်း၊ အစားအသောက် ချက်ပြုတ်ရေးတာဝန်ယူပေးရခြင်း...
သန်းစိုးလှိုင် (မိုးမခ ) ။ ရန်ကုန်။ မေ ၁၄၊ ၂၀၁၂ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူကက်တွင် ကျင်းပသည့် အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ အဖြစ်ကိုအမှတ်ရသည်။ြေ မာက်ကိုးရီးယားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်သည်နှင့် သတင်းထောက် အရေအတွက် ရာကျော်မှာ လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေကြသည်။...
သူတောင်းစားတဦး၏ နှစ်လည်အစီရင်ခံစာ မောင်ရစ်၊ မေ ၁၂၊ ၂၀၁၂ မိုးမခက တကွဲတပြား ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၀ိုင်းတော်သားတွေနဲ့တကွ ချစ်လှစွာသော စာဖတ်ပရိသတ်နဲ့ မိုးမခမိတ်ဆွေများကို ဒီစာနဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဧပြီ သင်္ကြန်ကာလမှာ မိုးမခမီဒီယာ...
ငြိမ်းချမ်းအေး မေ ၇၊ ၂ဝ၁၂(photo: REUTERS/Soe Zeya Tun)“—ကောင်းတဲ့ အချက်က “လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ အချိန်တုန်းက မူရင်းရေးဆွဲခဲ့တဲ့ အခြေခံဥပဒေ နဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းမှာ ထည့်သွင်းထားခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ ရည်မှန်းချက်၊ ခံယူတဲ့...
သော့ခလောက်ကြီးတန်းလန်းနဲ့ ကောင်းနိုင်ကြသေးရဲ့လားခင်ဗျ တူမောင်ညို။ မေ ၃။ ၂၀၁၂ (NLD) ပါတီ က (၃၀ ဧပြီ၊ ၂၀၁၂ ) တနင်္လာနေ့က ထုတ်ဝေတဲ့ ”ဒီလှိုင်းစာစောင်” အတွဲ ၁။ အမှတ်...
မှတ်မှတ်သားသား မှတ်တမ်းတင်ပါတယ် တူမောင်ညို။ မေ၁ ၊ ၂၀၁၂ (NLD) ပါတီက ရှေ့နေပညာရှင်ဦးဉာဏ်ဝင်း မကြာခင်က ပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ စတင်ပါရစေ။ “ကျနော်တို့ လွှတ်တော်ထဲကိုအရင်ဝင်၊ ဝင်ပြီးတော့မှပြင်လို့ မြင်တဲ့သူတွေကို ဘာမှဝေဖန်စရာသုံးသပ်စရာမရှိဘူး၊ ဒါက ကျနော်တို့...
Maung Wuntha & Kyaw Win – “အင်န်အယ်ဒီ၊ လွှတ်တော်နဲ့ ကျမ်းကျိန်စာသား သဘောထား” ကောက်နုတ်ချက်
စာရေးဆရာ မောင်ဝံသနဲ့ စာရေးဆရာကျော်ဝင်းတို့ရဲ့ “အင်န်အယ်ဒီ၊ လွှတ်တော်နဲ့ ကျမ်းကျိန်စာသား သဘောထား” ကောက်နုတ်ချက် မိုးမခ၊ ဧပြီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ ဧပြီ ၁ မှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ အင်န်အယ်ဒီအမတ် ၄၃...
U Myo (Law) – ဥပဒေကို လိုက်နာပါ၏ လော
ဦးမျိူး (ဥပဒေ)၊ ဧပြီ ၂၅၊ ၂၀၁၂ ခေတ်သစ် နိုင်ငံရေးအခြေခံ ဥပဒေပညာရှင် စီအက်ဖ် စထရောင်း (C . F . Strong ) က ”ဖွဲ့စည်ပုံ...
တူမောင်ညို ။ ဧပြီ ၂၃ ၊ ၂၀၁၂ ၂၃ ဧပြီ အစိုးရသတင်းစာထဲမှာ လွှတ်တော်တွေထဲမှာရှိနေတဲ့ စစ်သားအမတ်တွေကို ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က လဲလှယ် အစားထိုးလိုက်တဲ့ အကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြေညာချက်နှစ်ခု ထုတ်ပြန်ပြီး ဖေါ်ပြထားတယ်။...
“လေးစားလိုက်နာ”လို့ ပြင်မပေးရင် ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ တူမောင်ညို။ ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၂ “လေးစားလိုက်နာ” လို့ ပြင်မပေးရင် လွှတ်တော်ထဲ မဝင်သေးဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က အတည်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ “ဘာမဟုတ်တဲ့ စကားလုံး၊ စကားစုလေး”...
ဘယ်လိုလဲ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တူမောင်ညို ၊ ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၂ ဧပြီ ၁၄ ရက်နေ့တွင် (NLD) ပါတီက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ “ကျမ်းကျိန်လွှာမှာပါတဲ့ စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြံပြုစာ” ပေးပို့ခဲ့သည်။...
လွိုင်ကော်မြို့ မှ ကယန်းလူငယ်လေး ခွန်ကောရီယို (Khun Kawrio) ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် NO Vote ကန်ပိန်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သောကြောင့် မြင်းခြံထောင်တွင် ၃၇နှစ် ကျခံနေရတယ်လို့ရပါတယ်.. No tags for this...
သွန်းနေစိုး facebook.com/ThornNaySoul ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
Maung Yit – အယ်ဒီတာ့လက်ရေး (၉ )
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး (၉ ) မောင်ရစ်၊ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၂ မြန်မာနှစ်ကူး အမေရိကန်ဘောလုံးသမား၏ မေတ္တာစာ ကြားဖြတ်အလွန် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ပွဲ ပြီင်္းတော့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖလားပွဲ လား ဧပြီ ၁ မှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားပြီပေါ့။...
ကျမ်းသစ္စာဆိုကြရာဝယ် တူမောင်ညို ။ ဧပြီလ ၁၂၊ ၂၀၁၂ ၂၄ မတ်၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် “— ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တတိယအကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ခေတ္တ ရပ်နားမည်၊ အရေးတကြီးဆုံးဖြတ်ရန်ကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်အတွက်...
ကြည်ပြာမေ ဧပြီ ၁၁၊ ၂ဝ၁၂သင်္ကြန်မှာ ပေါင်ဒါမှုန့်နဲ့ လိုက်လိမ်းကြတာမျိုးကို ထိုင်းမှာ တားမြစ်လာပါပြီ (ဓာတ်ပုံ – ကြည်ပြာမေ/မိုးမခ) သင်္ကြန်ရောက်တော့မယ်။ ၂ ရက်ပဲ လိုတော့တယ်။ သင်္ကြန်ပွဲ နွှဲဖို့ လူတွေ အဆင်သင့်...